एउटा अदभुत सत्य घटना टाउको काटेको १८ महिना सम्म कुखुरा बाँचिह्यो – MeroOnline Khabar
टाउको काटेको १८ महिना सम्म कुखुरा बाँचिह्यो भन्ने थाहा पाउँदा तपाइलाई अचम्म लाग्न सक्छ । भएको छ त्यस्तै । तर, नेपालमा होइन् अमेरिकामा ।अमेरिकामा ७० वर्ष पहिले घटेको घटना हो । त्यहाँका एक किसानले एक कुखुराको टाउको छिनालिदिए । तर त्यो कुखुरा १८ महिना सम्म बाँचिरह्यो । अचम्म त झन यो भयो की, उक्त कुखुरा ‘मिराकल माइक’को नाममा संसारभरी चर्चित भयो ।
१० सेप्टेम्बर १९४५ मा कोलोराडोस्थित फ्रुटा फार्ममा लयड ओल्सेन र उनकी श्रीमती क्लारा कुखुरा काटिरहेका थिए । त्यसदिन उनीहरुले ४०–५० वटा कुखुरा काटेका थिए । तर, एउटा कुखुरा भने टाउको काटिएपछि पनि बाँचिरह्यो । ओल्सेन र क्लाराको छोरा वार्टस भन्छन् ‘जब आफ्नो काम सकेर मासु उठाउन लागेका थिए, तब काटेर राखिएको कुखुराको बीचमा एउटा घाँटी काटेको कुखुरा टाउको विना दौडिरहेको थियो ।’
त्यसपछि लयड र क्लारा टाउको काटेको माइकलाई लिएर अमेरिकाको भ्रमणमा निस्किए । उनीहरु क्यालिफोर्निया, एरिजोना र अमेरिकाको दक्षिणपूर्वि राज्यमा गए । माइकको यस यात्राबारे क्लाराले नोटबुकमा लेखेकी थिइन् जुन आज पनि वाटर्सको साथमा रहेको छ ।
← जागिर पनि कस्ता कस्ता ? अन्त्येष्टिमा रोइदिनुपर्ने अनौठो जागिर
वाइफाईको पासवर्ड चाहियो ? पत्ता लगाउन यसो गर्नुहोस,स्टेप बाई स्टेप तरिका सहित →